Iinkcazo zeeBond kunye neZibonelo kwiKhemistry
Iibhonkco Inkcazo kwiKhemistry
Iyintoni Ibhondi yeChemicals?
Kwi-chemistry, isibophelelo okanye ukukhonkxa kwamakhemikhali kukuqhagamshelana phakathi kwee-atom kwiimodlekli okanye i-compounds kunye ne- ions kunye ne-molecules kwi- crystals . Ibhondi ibonisa ukukhanga okuhlala phakathi kwama-atom ahlukeneyo, i-molecule okanye ion.
Kutheni ifomu leBond
Uninzi lweendlela zokubambisana lunokuchazwa ngumtsalane phakathi kweentlawulo ezimbini zombane. Iifomtoni ze-athomu okanye ion ziyakhangwa kwi-nucleus yazo eneenjongo ezintle (eziqulethe iprotoni), kodwa nakwiiuclei zama-atom eziseduze.
Iintlobo ezithatha inxaxheba kwiibhondi zamakhemikhali zizinzile xa kubakho ukubophelela, ngokuqhelekileyo kuba bekungalingani kwemali-mboleko (enkulu okanye encinane kwinombolo yee-elektronon kunezikhonkwane) okanye ngenxa yokuba iifowuni zasojikezi azizalanga okanye zizalise i-electron orbitals.
Imizekelo yeeMali zeMichiza
Iintlobo ezimbini ezibalulekileyo zezibophelelo zibophelelwano ezidibeneyo kunye nezibophelelo ze- ionic . Ukubambisana kwe-Covalent yilapho i-athomu yabelana ngama-electron ngaphezulu nangaphantsi. Kwi-ionic bond, i-electron kwi-athomu enye idlulela ixesha elidityanisiweyo kunye ne-nucleus kunye ne-electron orbitals yenye i-athomu (eyabelwe ngoku). Nangona kunjalo, ukuhlanganisana okucocekileyo kunye ne-ionic bonding inqabile. Ngokuqhelekileyo isibophelelo siphakathi phakathi kwe-ionic kunye ne-covalent. Kwi-bond ephihliweyo, i-electron ikwabelwana, kodwa ii-electron ezithatha inxaxheba kwibophelelo zikhangeleka kwi-atom enye kunezinye.
Olunye uhlobo lokudibanisa lubophelelwano bensimbi.
Kwizibophelelo zetsimbi, iifowuni zinikwe "kwinqanaba le-electron" phakathi kweqela lee-athomu. Ukudibanisa i-Metallic inamandla kakhulu, kodwa ubunjani bomnyuzi wee-elektronon ivumela umgangatho ophezulu wokuqhubela umbane kunye nokuhamba.
Iipropati zeSigxina zeZisombululo
Ionic Bond Inkcazo
Iyiphi Imimiselo yoMthetho weGesi odibeneyo?
Isixhobo sokuphucula izidalwa Inkcazo kwiKhemistry
Isisombululo Sokhuseleko kunye nemizekelo
I-Impact Effect Definition (i-Chemistry)
Yintoni iPSI? - Inkcazo yeCandelo
Delocalized Electron Definition
Vimba iCopolymer Definition
Ixesha elichazwe kwiKhemistry
6 I-Spooky Iikhathuni Zokuba Unakho Ukulibala
Indlela yokutshintsha iMali e-US esebenzisiweyo
Uhlalutyo lwe-'Wants 'nguGrace Paley
Ziziphi iiNtetho ezithetha ngesiJamani?
Uhlobo lweNtsapho ye-Mulligan / Windham
Indlela ootitshala abanokufumana ngayo uvuyo
Indlela "Ongabonakaliyo Isandla" seMakethe Ngaba, kwaye Awusebenzi
USt. Maria Faustina Kowalska weSigramente Eyona Ntsikelelo
Ukudweba Ubomi: Manga Nge Manga
I-Trinity College ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-10 ye-Rock Ballads yama-90s
Yintoni i-Shiawase ithetha ngesiJapane?
Funda Ngezihlandlo Zokugqibela kunye nendlela Eyenziwa ngayo
Yintoni i-Buttermilk? Ngaba Unayo Ibhotela?
Iifrentshi zesiFrentshi ngeBout
Iinqanaba eziLawulayo zokuPhatha ezi-5
Imfazwe yaseVietnam: Ukuwa kweSaigon
Iindaba eziNyaniso zamaMonta kunye namaCreptidi
IiHermbs zeJamani kunye neeNgcaciso zeGlosari
I-Paradise yePicaradesi yaseNickelodeon
Izigqeba Zomfazi Obulalayo uKarla Homolka noPaul Bernardo
I-Admissions yaseYunivesithi yaseMontclair